Zlt Disinfectant Sanitary Alcohol Wipes 1 Pack 100 Pcs – SUNNY eSTORE
Zlt Disinfectant Sanitary Alcohol Wip...
Zlt Disinfectant Sanitary Alcohol Wipes 1 Pack 100 Pcs
SUNNY eSTORESKU: AP-NOBR-1-271 (S010)
အသုံးပြုပုံများ - ပိုးသတ်ပေးသည့်တစ်ရှူးများသည် လက်များ၊ အရုပ်များ၊ ဖုန်းများ၊ laptop များ၊ လက်ကိုင်များ၊ ဓာတ်လှေခါးလက်တန်းများ၊ ဓာတ်လှေခါးခလုတ်များ၊ အများပြည်သူသုံးပစ္စည်းပစ္စယ များ အစရှိသောအရာဝတ္ထုများ၏ မျက်နှာပြင်ကို သုတ်ရန်အတွက် သင့်တော်ပြီး၊ အိမ်၊ ခရီးသွား၊ ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ မီးဖို၊ ရုံးခန်း၊ ပြပွဲအခင်းအကျင်းများ အစရှိသည်တို့တွင်လည်း အသုံးပြုနိုင် သည်။
သတိပြုရန် - မျက်လုံးများနှင့် ထိတွေ့မှုကို ရှောင်ရှားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသည့်နေ ရာတွင် ထားရှိရမည်။ အသားများ ကျိန်းစပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အရေပြားပေါ်တွင် အဖုအပိန့်အနီကွက်ထ ခြင်းများ ဖြစ်ပွားပါက အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်လိုက်ပါ။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည် အရက်ပြန်နှင့် တည့်၊မတည့် ကို သေချာအောင်လုပ်ပါ။ အထုပ်တွင် ပျက်စီးထိခိုက်မှုရှိပါက အသုံးမပြုပါနှင့်။
အရေအတွက် - အရက်ပြန်တစ်ရှူး အခု ၈၀ ပါသော အထုပ် ၁ ထုပ်
Applications: Disinfectant wipes are suitable for wiping the surface of objects like hands toys phones laptops handles elevator rails elevator buttons public facilities etc., and can be used for home, travel, hotel, restaurant, kitchen, office, exhibition occasions etc.
Caution: Avoid contact with eyes, keep away from children. In the event of skin irritation or rash discontinuance, please stop to use. Make sure your body is not allergic to alcohol. Do not use if package is damaged.
Includes: 1 pack of 100 pcs alcohol wipes